किरा र मच्छरहरुको दुश्मन बनेर आए यी व्याक्ती।बिश्वका बैज्ञानिकहरुले थाले अनुसन्धान ! कसरी बने यी ब्याक्ती मच्छरको दुश्मन , थाहा पाउँदा हासो रोक्न सक्नुहुन्न - Aajako Nepali Khabar
किरा र मच्छरहरुको दुश्मन बनेर आए यी व्याक्ती।बिश्वका बैज्ञानिकहरुले थाले अनुसन्धान ! कसरी बने यी ब्याक्ती मच्छरको दुश्मन , थाहा पाउँदा हासो रोक्न सक्नुहुन्न
एजेन्सी किरा र मच्छरहरुको दुश्मन। एक व्यक्तिको विषाक्तका पादका कारण लामखुट्टै मरेका छन् । यो सत्य घटना हो । ती व्यक्तिको पादको विषाक्तका कारण लामखुट्टे मरेपछि वैज्ञानिकहरुले पादमा पाइएको रसायनबारे अनुसन्धान सुरु गरेका छन् ।ती व्यक्तिले पादेपछि त्यसको असर ६ मिटरसम्म फैलिने गरेको छ । पादको विषाक्त फैलिएको ठाउँमा लामखुट्टेलगायत विभिन्न स-साना किराहरु मर्ने गरेका छन् ।
द मिररकाअनुसार यी व्यक्तिले आफ्नो पादका कारण लामो समयदेखि स–साना किराहरु मर्ने गरेका बताएका छन् ।अफ्रिकाको युगाण्डाका ४८ वर्षीय वामिरामाको पादले लामखुट्टे मरेको हो । पादले लामखुट्टे म’रेपछि एक कम्पनीले उनलाई एक कोठामा राखेर पाद संकलन गरेको छ ।
उनी जागिरेका रुपमा कोठामा जाने र पाद्‍ने गर्छन् ।कम्पनीले पादबाट नयाँ किटनाषक औषधि बनाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । अरु केही वैज्ञानिकलेसमेत पादको अध्ययनका लागि रकम दिएर उनको पाद लगेर गएका छन् ।पादका कारण युगाण्डाका यी व्यक्तिले आफ्नो गाउँलाई मलेरिया मुक्त बनाइसकेका छन् ।
पादमा पाइएको विषाक्त ग्यासका कारण आफ्नो गाउँ मलेरियाबाट मुक्त भएको स्थानीयले बताएका छन् ।यी व्यक्तिले सामान्य खानेकुरा खाने गरेको बताएका छन् । दैनिक नुहाउने उनी जहाँ गएर पाद्‍ने काम गर्छन्, त्यहाँका लामखुट्टे मर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।
कार्तिक २५ गते मंगलबार, पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
वैज्ञानिकले बनाए भ्यागुतोको कोशिकाबाट जीवित रोबोट हेर्नुस त !
सस्तो एक तले घर बनाउन आयो यस्तो विकल्प,7लाख रुपैयाँमा चार कोठाको घर